Dilka Ganacsade tusaale u ahaa Dhalinyarada oo Gilgilay Baraha Bulshada ee Soomaalida [Warbixin+Sawirro] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Dilka Ganacsade tusaale u ahaa Dhalinyarada oo Gilgilay Baraha Bulshada ee Soomaalida [Warbixin+Sawirro]
Maxamed Maxamuud Sheekh Cali oo ahaa nin dhallinyar oo caan ku ahaa ganacsiga magaalada Muqdisho iyo dhiiigelinta dhalinyrada kale oo maanta dabley hubeysan ku dileen magaalada Muqdisho ayaa gilgilay baraha bulshada ee Soomaalidu adeegsato.
Dhaawac daran ayaa ka soo gaaray Ganacsadaha oo loola cararay isbitaalka, halkaas oo uu ku geeriyooday. Maxamed Maxamuud ayaa ahaa dadkii qurbaha ka yimid, wuxuuna dalka ku soo noqday sannadkii 2011, isagoo tusaale u ahaa dhalinta u taagan horumarinta dalkooda.
Maxamed oo wada barnaamijka lagu dhiirri galiyo dhallinyarada
2012 ayuu noqday qofkii ugu horreeyey ee dalka ka hirgaliya adeegga Doobiga Dhar dhaqidda qallalan ee dharka (dry cleaning), adeeggaas oo aan dalka ka jirin tan iyo wixii ka dambeeyey xilligii uu waddanku galay burburka.
Maxamed iyo hooyadiis Sahra Maxamed Axmed
Dilka Maxamed Maxamuud Sheekh Cali waxaa cambaareeyey ururrada bulshada rayidka. Waxaana baraha bulshada hareeyay tacsi iyo farriimo murugo xambaarsan oo lagu muujinayo naxdinta ay reebtay geeridiisa.
Ma jirto cid loo qabtay dilka Maxamed Maxamuud Sheekh Cali. Dableydii dishay ayaa iyagana baxsaday. Wuxuuna ka mid noqon doonaa dadka farah badan ee sida joogtada ah loogu laayo Caasimadda Muqdisho.
Maxamed Maxamuud Sheekh Cali
Previous articleFaahfaahin dheeraad ah Askar ka tirsan Ciidamada dowladda lagu laayey duleedka Muqdisho
Next articleGuddiga joogtada ah ee Baarlamaanka oo kulan la yeeshay Guddiga Dastuurka ee labada Aqal [Sawirro]
Faahfaahin: Wadooyinka soo gala Magaalada Muqdisho oo maanta loo xiray…
XOG: Hanti- dhowrka oo xirtay Xafiiskii Maaliyadda Hay’adda NISA & Baaritaanka culus oo ku socda..
Koox hubeysan oo ganacsade ku dishay Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho.
Gabar dhalinyarro ah oo lagu dilay Magaalada Muqdisho & Ciidamada oo raadinaya Ninkii Dilka geystay
Gaari uu lahaa xildhibaan ka tirsan Maamulka K/Galbeed oo lagu Qarxiyey Muqdisho [Faahfaahin+Sawirro]
DEGDEG: Qarax Gaari oo Goor dhow ka dhacay Magaalada Muqdisho…